KATHMANDUTemperature 21.12°CAir Quality157
नेपालमा भने कोरोना नियन्त्रणको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले होइन, गृह मन्त्रालयले लिएजस्तो देखिन्छ ।
कोरोना संक्रमणले नेपाललाई पनि छपक्कै छोइसकेको देखिन्छ । सरोकारवाला मन्त्रीको लापर्वाही, स्वास्थ्य सामग्री झिकाउने काममा भ्रष्टाचार आदि–इत्यादि यसका प्रमाण हुन् । यति भएपछि त नेपाललाई पनि कोरोना प्रभावित भन्‍न मिलिहाल्यो ।
कोरोना भाइरस भनौँ वा कोभिड–१९ । सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो, यो त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय हो । तर नेपालमा भने कोरोना नियन्त्रणको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले होइन, गृह मन्त्रालयले लिएजस्तो देखिन्छ । किनभने कोरोना नियन्त्रणको अभियानमा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा पनि गृह मन्त्रालय बढी सक्रिय भएको देख्छु । नपत्याए तपाईं यसो घरबाट बाहिर गएर हेर्नुस्, त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं आफैँले गर्न पाउनु हुनेछ । तपाईंको पछाडि तुरुन्तै एक बथान प्रहरी (अथवा सशस्त्र प्रहरी पनि हुन सक्छ, जात एउटै हो) आएर लाठी वर्षाउन थालिहाल्छ । ‘किन’ भनेर सोध्‍न भ्याउन्जेलसम्म उनीहरूले तपाईंको टाउकोमा तीन टुटुल्को र ढाडमा सात लाठीको प्रिन्ट छाप्‍न भ्याइसकेको हुनेछ ।
यति गरिसकेपछि अनि बल्ल उनीहरूले तपाईंलाई सोध्‍नेछन्– बाहिर किन आएको ? तर त्यतिन्जेलसम्म तपाईंको हालत यति खराब भइसकेको हुनेछ कि तपाईंले न बाहिर आएको कारण भन्‍न सक्नु हुनेछ, न भित्र जाने अनुमति ।
अहिले जताततै देखिइरहेको दृश्य यही हो । सायद कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले सबैभन्दा बढी गरिरहेको काम पनि यही नै हो । कोरोना नियन्त्रण कार्यमा सबैभन्दा बढी खटिनुपर्ने त डाक्टर तथा नर्स हो । तर हाम्रोमा डाक्टर–नर्सभन्दा पनि प्रहरी बढी खटिरहेको देखिन्छ ।
डाक्टर–नर्सहरू त कोही मास्क छैन भन्दै, कोही पीपीई छैन भन्दै पछि नै हटिरहेका छन् । अगाडि त केवल प्रहरी मात्रै बढिरहेको देख्छु । कोरोना नियन्त्रणका लागि अहिले प्रहरीले जति मिहिनेत गरिरहेको हो, त्यति त कुनै डाक्टर र नर्सले पनि गरेका छैनन् होला । त्यही भएर पनि होला, कोराना नियन्त्रण कार्य स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरेर गृहमा पुग्या हो कि भन्‍ने लागेको ।
उसो त अहिले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कोरोना–फोरोना हेर्ने फुर्सद पनि छैन । विदेशबाट सामान ल्याउने ठेकेदार मिलाउने र ठेकेदारसँग हिसाब मिलाउने गर्दागर्दै नै उनको टाइम गइरहेको छ । अवस्था यस्तो भएपछि कोरोना नियन्त्रणको जिम्मा विचरा प्रहरीले नठामे कसले ठाम्छ ?
कोरोनाको मारले अहिले संसारका मै हुँ भन्‍ने देशहरूलाई समेत धमाधम ठेगान लगाउँदै आइरहेको छ । अहिले त देश मात्र होइन, ती देशका ठूला नेताहरूसमेत कोरोना संक्रमणको सिकार बन्‍न थालेका समाचार पनि आउन थालेका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई संक्रमण, जर्मनीका चान्सलरलाई संक्रमण, बेल्जियमका मन्त्रीलाई संक्रमण... खोज्दै गयौँ भने सूची लामो पनि हुन सक्छ ।
विदेशी नेताहरूको सूची जतिसुकै लामो भए पनि हाम्रा स्वदेशी नेताहरूको अवस्था भने त्यस्तो छैन । हाम्रा सबै नेताहरू सुरक्षित छन् । आजसम्म कुनै पनि नेतालाई कोरोना संक्रमण भयो भन्‍ने समाचार सुन्‍नमा आएको छैन । सरकारमा भएका कुनै पनि मन्त्री अहिलेसम्म कोरोनाका कारण बिरामी भएका छैनन् । यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो तै नि खोज्‍नु त पर्‍यो नि– उनीहरू आजसम्म कसरी कोरोनाबाट बच्‍न सफल भए ? विदेशी नेताहरूका लागि पनि यो उपयोगी हुन सक्छ ।
नेपाली नेताहरूलाई अहिलेसम्म कोरोनाले छुन नसक्नुको सबैभन्दा प्रमुख कारण हो– सोसियल डिस्ट्यान्स । सरकारले नै भनिरहेको छ, कोरोनाबाट बच्‍ने हो भने सोसियल डिस्ट्यान्स बनाउनुस् । हाम्रा नेताहरूको ‘सोसियल डिस्ट्यान्स’ अत्यन्तै तगडा छ । सोसियल डिस्ट्यान्स अर्थात् सामाजिक दूरी । समाजसँग हाम्रा नेताहरूको यो दूरी अत्यन्तै लामो छ । भनुँ, समाज र हाम्रा नेताहरूबीचको दूरी बहुतै बढिया छ ।
हाम्रा नेताहरू र समाजबीचको यो ‘सोसियल डिस्ट्यान्स’ आजको पनि होइन । यो त धेरै अघिदेखि नै कायम हुँदै आएको दूरी हो । त्यसैले नेता र समाजबीच सम्पर्क र भेटघाट भनेको त्यस्तो हुनै पाउँदैन ।
नेताहरू समाजको सम्पर्कमा आउने भनेको उही चुनावको एक टाइम हो । अरु बेला त दूरी नै दूरी हो । एउटा चुनावबाहेक अरु बेला नेताहरू कहाँ हुन्छन्, त्यो समाजलाई थाहासम्म पनि हुँदैन । त्यति गहिरो दूरी हुन्छ । त्यसो त समाज कहाँ छ, त्यो नेताहरूलाई पनि थाहा हुँदैन । दूरी नै यति लामो छ त थाहा कसरी हुन्छ ?
जुन नेताहरूको सामाजिक दूरी नै यति मजबुत हुन्छ, तिनीहरूलाई कसरी कोरोना संक्रमण लागोस् ? होइन र !